Daahir Cirro: ” Ciyaartoyda iyo Macallinka Puntland waa la jir dilay mana la isaga harayo | Baydhabo Online
Daahir Cirro: ” Ciyaartoyda iyo Macallinka Puntland waa la jir dilay mana la isaga harayo
Daahir Cabdiqaadir Muuse oo ka mid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada uu ka arrimiyo Maamulka Puntland oo Shabelle la hadlay ayaa sheegay in la dhibaateeyay Ciyaartoyda iyo Macallinka Kooxda u mataleysay Maamulka Puntland Ciyaaraha kubadda Cagta maamul Goboleedyada Soomaaliyeed ee ka soconaya Magaalada Muqdisho.
Siyaasiga ayaa tilmaamay in Ciyaartii u dhexeysay Gobolka Banaadir iyo Puntland Ciyaartoyda Puntland loo geystay dhibaatooyin kala duwan sida uu hadalka u dhigay , islamarkaana jir dil xoogan loo geystay Macallinka Xulka kubadda cagta ee maamulka Puntland.
Wuxuuna Daahir Cirro Carabka ku dhuftay in Askar iyo Saraakiil dowladda Federaalka Soomaaliya ka tirsan ay qeyb ka ahaayeen Jir dilka loo geystay Ciyaartooyda iyo Macallinka Xulka Puntland taas oo uu sheegay in aan looga hari doonin oo lagala xisaabtami dooni cid allaala ciddi ku lugta lahayd.
Sidoo kale Mr Daahir Cirro ayaa ku nuux nuuxsaday in Ciyaarahaan ay sii hurinayaan dhibaato ka dhex aloosanta dadka Soomaaliyeed oo aan weli dib u heshiisiin dhab ah loo sameynin.
Isagoona sharci darro ku tilmaamay in xiligaan Ciyaaro ku saleysan maamul Goboleedyada loo qabto.
Talaadadii la soo dhaafay ayey ahayd markii kulan Ciyaareed u dhexeeyay Banaadir iyo Puntland ay ku soo idlaatay Bar bar dhac 2-2 , kulan ciyaareedkaas oo ka dhacay Garoonka Banaadir Stadium ( Koonis Stadium).
Ciidamada ammaanka ku sugnaa Garoonka kubadda Cagta ee degmada Cabdicasiis ayaa jir dil xoog leh u geystay Macallinka Xulka Puntland kaas oo naqaska uu ku xirmay , islamarkaana haatan lagu dabiibayo Isbitaal ku yaalla Magaalada Muqdisho.